AMD Threadripper 25% nekukurumidza paUbuntu pane paWindows | Linux Vakapindwa muropa
AMD Threadripper 25% nekukurumidza paUbuntu pane paWindows
Isaac | | Kugoverwa, Noticias, Resources
Kana iwe uine a AMD Threadripper, uye iwe zvakare unoshandisa Linux, iwe uri mune mhanza. Uye ndezvekuti zvakaratidzwa mune akateedzana mabhenji kuti ichi chikara chekugadzirisa chinoburitsa avhareji ye25% yakawanda muUbuntu kupfuura muWindows mumayedzo ekugadzira ayo aakawana, iri inhau dzakanaka.
Kunyanya, kune iyo bvunzo, iyo AMD Threadripper 3990X ine makumi matanhatu makumi matanhatu neshanu netambo yakashandiswa. Nezve bvunzo, iyo suite yemabhenji yakashandiswa Phoronix Bvunzo Suite kubva kupi Ndatotaura pano. Kutenda kwazviri, zvave zvichikwanisika kuenzanisa mapuratifomu maviri nemhando dzakasiyana bvunzo, nekuti iri kodhi inoenderana neanoshanda masystem (chimwe chinhu chisingaitike nemamwe maturusi asingawanikwe natively pane ese masystem kuenzanisa).
Kutenda bvunzo idzi dzePhoronix, zvaigoneka kuyera iyi AMD Threadripper 3990x yakagadzirirwa 128GB yeDDR4 RAM uye AMD Radeon RX 5700XT kadhi yemifananidzo. Nezve iyo inoshanda sisitimu, iyo vhezheni yakasarudzwa chaizvo Ubuntu 21.04 uye Windows 10, ese ari makumi matanhatu nemasere.
Chinhu chakajairika ndechekuti mune kumwe kuyedza imwe sisitimu inoshanda inokunda uye kune vamwe imwe inokunda, kuenzanisa mhedzisiro. Uye kunyangwe kana sisitimu yekushandisa ikakunda mumiedzo mizhinji, misiyano yacho ishoma, sezvazvinowanzoitika mune kumwe kuenzanisa kwakaitwa kare. Panzvimbo iyoyo zvange zvisiri izvo pano, uye Ubuntu inokunda neavhareji ye25% mashandiro pamusoro peWindows, izvo zvinotyisa ...
Pakupedzisira, Ubuntu 21.04 yakarova Windows 10 mukati 82% yemayedzo makumi manomwe nemapfumbamwe akaitwa. Izvo zvinoratidza kuti Canonical's system isarudzo yakanaka kwazvo kana zvasvika kune HEDT (High-End Desktop) masisitimu.
Kuvaona mhedzisiro yemagirafu unogona shanyira webhu ino. Iwe zvakare une ruzivo mu OpenBenchmarking.org.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » AMD Threadripper 25% nekukurumidza paUbuntu pane paWindows
Linux Inobatsira Kugadzirira Chikoro chePandemic Era
Blender 2.93 inosvika senge itsva LTS vhezheni neimwe boka renhau dzakakurumbira